जापानमा फेब्रुअरी! कसरी सुन्दर हिउँदको संसारको मजा लिन - Best of Japan
योकोटे कामकुरा हिउँ महोत्सव = एडोब स्टक
फेब्रुअरी जापानको सबैभन्दा चिसो समय हो। ओकिनावा जस्ता केहि क्षेत्रहरू बाहेक, तपाईंलाई शहरमा हिंड्दा तपाईंलाई कोट वा जम्पर चाहिन्छ। यस समयमा, स्की रिसोर्टहरू तिनीहरूको उत्तम अवस्थामा छन्। हिउँ पर्ने क्षेत्रमा, तपाईं सुन्दर हिउँद दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं गाइड पुस्तकमा देख्न सक्नुहुन्छ। यी चीजहरू बाहेक, फेब्रुअरीमा यात्रा गर्दा अर्को रमाइलो कुरा पनि छ। जाडोको विभिन्न चाडहरु जापानको विभिन्न भागहरु मा आयोजित गरिन्छ। यस पृष्ठमा, म मुख्य रूपमा यी जाडो चाडहरूको परिचय दिनेछु।
टोक्यो, ओसाका, फेब्रुअरीमा होक्काइडो को जानकारी
हरेक फेब्रुअरीमा शीतकालीन चाडहरू आउँछन्
यदि तपाईं फेब्रुअरीमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका लिंकको अनुसरण गर्नुहोस् अधिक विवरणहरूको लागि।
यहाँ जाडो चाडहरू छन् म तपाईंलाई सिफारिस गर्न चाहन्छु।
योकोटे कामकुरा हिउँ महोत्सव
सबैभन्दा पहिले, मलाई उत्तरी होन्शुको अकिता प्रान्त, योकोटेमा प्रत्येक वर्ष आयोजित प्रसिद्ध उत्सवबाट सुरू गरौं। प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी मा, स्थानीयहरु माथिको फोटो मा देखिए अनुसार "योकोटे कनकुरास महोत्सव"।
"कामकुरा" हिउँले बनेको सानो गुम्बज हो। योकोटे शहरमा प्रत्येक वर्ष धेरै हिउँ पर्ने भएकोले मानिसहरूले हिउँ कडा बनाउँदछन् र "कामकुरा" बनाउनका लागि यसलाई काट्छन्।
यो चाड अवधिमा योकोटे शहरमा करीव meters मिटर उचाईको १०० "कामकुरा" बनाइन्छ। तलको चित्रमा देख्न सकिन्छ, त्यहाँ धेरै साना "कामकुरा" पनि छन्।
कामकुरामा स्थानीय मानिसहरूले तपाईंलाई स्वागत गर्न र चामलको केकको साथ न्यानो पेय पदार्थ दिन सक्छन्। चिसो रातमा, कामकुरामा प्रज्ज्वलित बत्तीहरू धेरै रमणीय र सुन्दर देखिन्छन्। यो यस चाडको एक आकर्षक पक्ष हो जुन तपाईं स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ।
SideArm वा रोप्ने फेस्टिवल, योकोटे, अकिता, जापान = एडोब स्टक
सप्पोरो हिउँ महोत्सव
सप्पोरो होक्काइडो, जापानको अवलोकन डेकबाट सप्पोरो हिउँ महोत्सवको बेला ओडोरी पार्कको दृश्य = शटरस्टक
फेब्रुअरीमा आयोजित जापानी जाडोको उत्सवहरू मध्ये सबैभन्दा प्रसिद्ध "सप्पोरो हिउँ फेस्टिवल" हो। सप्पोरो होक्काइडोको प्रतिनिधि शहर हो। यो उत्सव फेब्रुअरीको पहिलो आधा मा हरेक वर्ष साप्पोरो मा आयोजित छ। दुबै जापान र विदेशबाट लाखौं पर्यटकहरू छन्।
यस चाडको तीन मुख्य ठाउँहरू छन्। ओप्पोरी पार्क, सप्पोरोको बीचमा, धेरै विशाल हिम मूर्तिहरू लाइन लगाइएको छ। सुसुकिनोको मनोरन्जन जिल्ला, सुसुकिनोमा, तपाईं बरफको मूर्तिहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, मनोरन्जन सुविधाहरू जस्तै विशाल हिउँ स्लाइड साप्पोरोको बाहिरी भागमा स्थापना गरिएको छ। यो बच्चाहरूमा धेरै लोकप्रिय छ।
तातो पेय पदार्थ र खाना बेच्ने धेरै पसलहरू उत्सव स्थानहरूमा खोलिएका छन्। यस अवधिमा सप्पोरोमा औसत तापमान negativeणात्मक degrees डिग्री सेल्सियसको आसपास हुन्छ। यो धेरै चिसो भए पनि, आगन्तुकहरूले राम्रो हिउँको मूर्तिहरू अवलोकन गर्दा न्यानो पेय पदार्थ पिउँछन्। तपाईं किन यस चाडमा सम्मिलित हुनुहुन्न?
Asahikawa शीतकालीन महोत्सव
हिउँ पर्व २०१ 2017 मा जाडो, Asahikawa, Hokkaido, जापान मा राती रंगीन बत्ती संग हिउँ मूर्तिकलाहरु = शटरस्टक
Asahiyama चिडियाखाना Asahikawa शहर मा, Hokkaido = AdobeStock
हरेक वर्ष होक्काइडोमा, "Asahikawa शीतकालीन महोत्सव" Asahikawa शहर मा एकै समय मा सपोरो हिउँ उत्सव को रूप मा आयोजित छ। यो उत्सव पनि धेरै लोकप्रिय छ र लगभग १ लाख पर्यटकहरू आउन प्रत्येक वर्ष आउँदछन्।
यो Asahikawa चाड सप्पोरो भन्दा दुई आकर्षण छ। सबैभन्दा पहिले, Asahikawa चाडमा, विश्वको सबैभन्दा ठूलो हिम शिल्प प्रदर्शित छ। असाहिकावासँग सप्पोरो भन्दा कम हिउँ मूर्तिहरू छन्, तर त्यहाँ विशाल हिउँका मूर्तिहरू छन् जुन तपाईं साप्पोरोमा देख्न सक्नुहुन्न।
दोस्रो आकर्षण यो हो कि असाहिकावा भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूले यस उत्सवको अलावा प्रसिद्ध असाहिमा चिडियाखानालाई देख्न सक्छन्। असाहिमा चिडियाखानामा, तपाईले धेरै अनौंठो शीतकालीन कार्यक्रमहरू देख्न सक्नुहुनेछ, बर्षे यस समयमा पेन्गुइन मार्च सहित। जब तपाईं Asahikawa भ्रमण गर्नुहुन्छ, दुबै जाडोको चाड र Asahiyama चिडियाखानाको संयोजन रमाईलो र सन्तोषजनक हुनेछ।
जापानको सबैभन्दा सिफारिश गरिएको चाडहरू जाडो, वसन्त, गर्मी, शरद .तुमा
जापानमा स्वागत छ! Beautiful० राम्रा फोटोहरूको मजा लिनुहोस्!